Manjaro Linux 2019 Guide Fametrahana | Avy amin'ny Linux
Manjaro Linux no mpizara Linux malaza indrindra amin'izao fotoana izao raha ny laharana Distrowatch Ary na dia avy amin'ny Arch Linux aza izy io, io fizarana io dia manamora ny fampidiran'ny mpampiasa ny Arch Linux, satria tsy ny rehetra no mikasa ny hametraka Arch Linux madio.
Ity indray mitoraka ity andao jerena ny fomba hametrahana Manajaro Linux amin'ny fomba somary tsotra Ary tokony homarihina fa ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ireo vao teraka izay liana te-hanandrana ny Arch Linux.
1 Raiso ny Manjaro Linux
2 Ahoana ny fametrahana Manjaro Linux
Raiso ny Manjaro Linux
Ny dingana voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny misintona ny Manjaro ISO, eto dia tokony ho fantatrao fa misy kinova maromaro azo alaina, samy manana ny tontolon'ny birao misy azy ireo, ao anatin'izany ny KDE, XFCE ary GNOME ho fanampin'ny kinovan'ny fiarahamonina.
Azonao atao ny misintona ny Manjaro Linux amin'ny tranokala ofisialiny ny rohy dia ity.
Rehefa nanapa-kevitra ianao hoe inona no kinova tianao hampiasaina, kitiho ny rohy fampidinana mivantana.
Windows: Azontsika atao ny mandoro ny iso amin'ny Imgburn, UltraISO, Nero na programa hafa na dia tsy misy azy ireo aza ao amin'ny Windows 7 ary avy eo manome antsika safidy hanindriana havanana amin'ny ISO.
Safidy iray hafa i Etcher satria cross-platform io.
Ahoana ny fametrahana Manjaro Linux
Hanombohana ny fametrahana Manjaro, hametraka ny mpampita vaovao izay vao nomaninay teo amin'ny solosaintsika izay hanatanterahanay ny fametrahana ary handrosoana ny rafitra.
Alohan'ny hanombohana ny installer dia mila mifandray amin'ny Internet ianao. Raha mampiasa fifandraisana Ethernet ianao dia tokony efa mifandray, fa raha mampiasa WIFI ianao dia tsindrio ny kisary tambajotra eo amin'ny zoro ambony ankavanan'ny efijery ary safidio ny safidy "select network".
Tsindrio ny tambajotra tianao ampifandraisina ary ampidiro ny teny miafina raha ilaina.
Hanombohana ny fizotry ny fametrahana azy, Tsindrio ny kisary "Launch Installer" eo amin'ny efijery fandraisana.
Azonao atao ny mahita lisitra iray eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery ary ireo no dingana handalovanao hametrahana an'i Manjaro. Ny dingana voalohany dia ny fisafidianana ny fiteny ho an'ny installer.
Ny dingana faharoa dia mitarika anao hisafidy ny toerana misy anao. Izany dia hamaritra ny faritry ny solosainanao ary hametraka ny famantaranandro amin'ny ora marina
Azon'izy ireo atao koa ny misafidy ny fiteny amin'ny rafitr'izy ireo sy ny toerana misy ny isa sy daty.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny toerana sy ny fiteninao dia efa hapetraka amin'ny sanda marinaEny, fa raha tsy manova azy ireo ianao dia tsindrio ny «Manaraka».
Hangatahana ianao hisafidy ny lamina fitendry anao.
toerana misy anao, ny fiteny amin'ny fitendry anao dia ny toerana misy ny mpiorina Manjaro dia nanapa-kevitra fa marina izany. Azon'izy ireo atao ny mizaha toetra ny endriny amin'ny alàlan'ny fanoratana ao amin'ilay efajoro nomena.
Raha diso ny layout, safidio ny fiteny amin'ny tontonana ankavia ary avy eo ny layout marina ao amin'ny tontonana ankavanana.
Amin'ny dingana manaraka amin'ny efijery fizara dia avela hisafidy ny toerana tianao hametrahana Manjaro ianao.
Ny safidy dia misy ny "fametrahana miaraka", "fanoloana fizarazarana", "famafana kapila" na "fizarazaran-tanana".
Raha te-boot roa miaraka amin'ny Windows izy ireo dia afaka misafidy ny hametraka miaraka ary avy eo misafidy ny fizarazaran'izy ireo tehirizina hametraka an'i Manjaro.
Raha te hisolo fizara amin'ny kapilao ianao amin'ny Manjaro dia safidio ny safidy "Soloy fizarazaran" ary avy eo safidio ny fizarazanao tianao hosoloina.
Mba hahatonga an'i Manjaro ho hany rafitra miasa amin'ny kapilao, tsindrio ny safidy "Hamafa kapila" ary kitiho ny "Manaraka".
Ankehitriny dia mila mamorona ny mpampiasa default ianao. Amin'ny dingana manaraka dia mila mampiditra ny anarany, ny solonanarany ary ny anarany amin'ny solosain'izy ireo izy ireo.
avy eo Mila manendry ny teny miafinao tianao hampiasaina ho an'io mpampiasa io ianao ary tenimiafina fanamafisana.
Ho fanampin'ny tenimiafin'ny mpampiasa misy anao dia afaka mampiditra teny miafina hafa ho an'ny mpitantana izy ireo ary manamafy izany.
Na izany aza, Raha tianao hitovy amin'ny tenimiafin'ny mpampiasa ny teny miafin'ny mpandrindra dia kitiho ny safidy "Ampiasao ny teny miafina mitovy amin'ny kaonty mpandrindra".
Amin'ny fipihana ny "Install" dia omena fotoana farany hiverina ianao. Raha azonao antoka fa te hanohy ianao dia kitiho ny "Install Now".
Amin'ny faran'ny fametrahana dia esory fotsiny ny media fampidirana ary avereno ny solosaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Manjaro Linux 2019 Guide fametrahana
Kino dia hoy izy:
Ampidiro manjaro 19.1 eo akaikin'ny mint 19.3, miaraka amin'ny uefi the 2 ary miasa tsara izy ireo. Manjaro dia manana safidy betsaka noho ny mint ary tokony ho azo antoka kokoa izany raha ny filazan'ireo izay mahalala. Nandany vola kely aho tamin'ny fampandehanana ny Bluetooth fa ny x ny andalan-dàlana mankany amin'ny hafa tsy misy ma, distro tena tsara tokoa izany hoy izy ireo ary hatreto tsy misy olana fa mampiasa mint foana ao amin'ity kahie ity sy ny sakafo matsiro ao amin'ny netbook Asus aho fa manana aho fa izao kosa ny tahony Mavesatra amin'ny harato satria milina 10 taona io. Ireo distros 2 nolazaiko teo alohan'ny hampiasako azy ireo amin'ny lenovo 50-80 ary mihazakazaka tsara izy ireo miaraka amina generasi 3 sy ram 5gb. Mazava aho fa ampio sdd 16 gb izay apetrako ny distros, esory ny mpamaky ary apetrako eo amin'ny toerany ny 240 tera hdd izay nitondra ny kahie ary ity farany ampiasaiko ho tranon'ny distro ary mamela toerana ao amin'ny ssd hametrahana openuse koa , arahabaona
Mamaly an'i kino
Nvidia dia manolotra ny GeForce RTX 2060 sy ny fanohanana FreeSync